विचार - साक्षी खबर विचार - साक्षी खबर
‘कोभिड–१९’ सँग बच्न सतर्कता खोई ?
कोभिड–१९ का कारण देशको हरेक क्षेत्र प्रभावित बनेको छ । कोभिडसँग बच्नका लागि हरेक नागरिक उत्तिकै सर्तक बन्न जरुरी छ । एउटा मानिस मास्क लगाउनुहोस् भन्दै सडकमा हिडिरहेको हुन्छ । अझ भनौ समाजमा आफूलाई सभ्य, बुद्धिजीवी ठान्ने वर्गबाटै मास्क नलगाई हिडिरहेको देख्छौ । सामाजिक दुरी कायम गरिएको छैन । यातायातका …
पर्यावरणमा एउटा मियो अर्ग्यानिक खेती र जैविक विविधता संरक्षण
नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गतको धारा १६ को उपधारा ४४ मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हकको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी सोही धाराको उपधारा ३६ को एकमा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानले समेत स्वस्थ खानेकुराहरुलाई समावेश गरेको छ …
‘एसईई’ मूल्याङ्कन र सिर्जित एउटा बहस
पृष्ठभूमिअनौपचारिक शिक्षाको ईतिहास लामो भएता पनि नेपालमा विद्यालयीय शिक्षा र प्रवेशिका परीक्षाको ईतिहास त्यति लामो छैन । नेपालका प्रथम राणा प्रधानमन्त्री श्री ३ जंगबहादुर राणाले बेलायतको भ्रमण गरेर स्वदेश फर्किसकेपछि वि.सं. १९१० असोज २४ गते आफ्नो निवास थापाथली दरबार स्थित दाख चोकमा अंग्रेजी प्रारम्भिक स्कुल स्थापना गरेका थिए । यसरी …
‘माडी’ शारदा सपना नबनोस् !
शारदा नदीको पानी दाङमा ल्याउने यो सपना बाँडेको वर्षौ भयो तर अहिले पुरा हुने सम्भावना देखिएन । नेताले सपना देखाउँदा सम्भावनाका आधारहरु समेत देखाउन सक्नुपर्छ । शारदाको पानी दाङमा ल्याउन सकिने कुनै आधार तय भएन । अब माडीको पानी दाङ उपत्यकामा ल्याउने सपना बाँडिएको छ । जुन कार्यका लागि प्रारम्भिक …
कृष्णको कीर्तन गाउन सजिलो छ, कृष्णको आवरणमा नाटक खेल्न रमाइलो लाग्छ । प्रवचन ठोक्न अझ सजिलो छ, गीताका दुईचार श्लोक भट्ट्याएर विद्वत्ता छाँट्न त उकालो चढ्नै पर्दैन । आज नेता होस् कि व्यापारी, विद्यार्थी होस् कि शिकारी कृष्ण महिमा छाँट्न को चुक्ला र । हामी देवपुरुषको गुणकीर्तन गर्छौँ, अरुलाई सुधार्न …
एकता कि सहअस्तित्व ?
कोही फुट्नु र जुट्नुले जनतालाई कुनै असर गर्दैन । जे असर पर्छ तिनै सत्ताका लोभी ब्वाँसाहरूलाई मात्र पर्छ । एकताको दमाहा बज्नु पनि यतिखेर स्वार्थ, सुरक्षाको बहानाबाजी हो । एकता कहिल्यै सम्भव छैन । एकता भएजस्तो देखिन्छ तर त्यो एकताको नाममा एकले अर्कालाई ढडियामा फसाएको मात्र हो । कसरी हुन …
सरकार परिवर्तन र गुटगतको संस्कारभित्र चरम व्यक्तिवादको बढ्दो श्रृङ्खला
खोजी उसैको हुन्छ जो हराएको छ तर लुकेकाहरुलाई भेट्न निकै कठिन हुन्छ । गलत अपव्याख्या गरिँदै सरकारलाई भन्ने गरिन्छ खोई सरकार, निर्मलाका निम्ति न्याय दिन नसक्ने, सरकार पश्चिम रुकुमको घटनाका पीडितलाई न्याय दिन सकेन, सरकार ३३ किलो सुन काण्ड के भयो ? सरकारले के गर्न सक्ला ? आफू चै व्यवहारमा …
हरेक वर्ष श्रावण शुक्ल पक्षको पुर्णिमाको दिन मनाइने रक्षा–बन्धन पर्व नेपाल भारत लगायत हिन्दु धर्मको लागिमात्र नभई सम्पूर्ण मानव जातिकै महत्वपूर्ण अवसरकै रुपमा लिइन्छ । यो पारस्परिक रुपमा भाई बहिनीको आपसी स्नेहको रुपमा मनाउने गरिन्छ । यस दिनमा बहिनीले भाइलाई रक्षा सुत्र बाँध्ने गर्दछिन् । बहिनीले भाइलाई रक्षा बन्धन बाँधेपछि …
साउने अखण्ड र नेपथ्यका लीलाहरू
यो साउनको महिना हरिकीर्तनको महिना हो । हरिशयनी एकादशीले दैलो टेकेपछि चाडपर्वहरू लसलस आउँछन् रे । चाडपर्वको नाम सुन्दा पनि सानामा हाम्रो मुखभरि र्याल छुट्थ्यो । नयाँ लुगा फेर्ने, पूजाआजामा चढाएका फलप्रसाद खान पाइने, लगत्तै आउने श्राद्धमा खिर–फुलौरा हजम पार्ने र दसैँमा चोक्टा हिर्काउन पाइने कल्पनाले मन हिरिक्क हुन्थ्यो । …
निजी शैक्षिक संस्थाका गथासा र शिक्षक
कठै ! हामी निजी शिक्षक । हाम्रो वर्तमान कोरोनाले भताभुङ्ग छ । हाम्रो दयनीयतामा राज्य मौन छ । मानौँ हामी अनागरिक हौँ । सरकारले सिमेन्ट र फलामे छड बेच्नेलाई बैँकिङ राहत दिएको छ । सके विमान सेवा प्रदायकलाई भारी राहत दिएको होला । बजारमा अकुत मुनाफा सोहर्ने र भ्याट छली …
« अघिल्लो पृष्ठ 1 …34567… 14 अर्को पृष्ठ »